Nbudata Tupolev Tu-114 126 FSX & P3D - Rikoooo
downloads 9 356
Auto-install 10 ngwa ngwa
Lockheed Martin Prepar3D ruru v3
Samdim Design, repack site Andreas Rotowski
Lee Tupolev TU-114 na TU-126 (126 ịbụ ihe AWACS). Ihe ngwungwu a bu udi ihe puru iche FSX nke Andreas Rotowski na-agụnye ọtụtụ ndozi na mmelite. Cablọ ugbo elu ahụ na-arụ ọrụ zuru oke na 3D ma na-enye ohere ịga ije na paseeji. Ihe ngwugwu a gụnyere ụdị 3 na ndoghachi 3, ụda omenala (eriri eriri, enweghị switches) mebere kokpiiti na ogwe aka 2D siri ike.
Gụnyere na zuru akwụkwọ na English na dị kpọmkwem online (Manual.html) Ma ọ bụ na mkpọ. Ọ dị mkpa iji na-agụ akwụkwọ ntuziaka
The Tupolev-114 bụ a Soviet turboprop airliner wuru na 1950s.
The Aeroflot, na ụgbọelu nke USSR, chọrọ ihe airliner ike ibu nnukwu mba na njikọ na-eje ozi dị ka a na nkà na ụzụ ngosi na ukọ. Enyere ha aka ọkwọ ụgbọala, ndị nnyocha ngalaba nke Andrei Tupolev nkịtị ghọtara emepụta otu bombu Tu-95. The Tupolev 114-anọgide ndị kasị ibu na kasị na turboprop njem ugbo elu mgbe wuru. Ọ na-kwadoro site na anọ turboprop Kuznetsov NK-12. E ji on isi e: Moscow-Havana, Moscow-Tokyo. Ọ e mere ma ama site na nleta nke Nikita Khrushchev na United States na 1959.
Ọ na-dethroned site ọdịdị ogologo osisi ugboelu dị ka Ilyushin Il-62. (Wikipedia)
Onye edemede: Samdim Design, ahaziri Andreas Rotowski
Họrọ Tu-124 Tupolev FSX SP2 & P3D
Họrọ Tu-16 Badger Tupolev FSX & P3D 3
Tupolev Tu-154B2 Siberia ụgbọ elu FSX & P3D